जसले तीन दिन अगाडी भित्र्याएकी आफ्नी श्रीमतीको उनका प्रेमीसंग विवाह गराइदिए... - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १४ चैत्र २०७४, बुधबार ०७:४४ |
एजेन्सी। विवाह गरेर भित्र्याएकी श्रीमतीको अर्कै प्रेमी रहेको थाहा पाएपछि एक व्यक्तिले श्रीमतीलाई उनको प्रेमीसंग विवाह गराइदिएका छन्। विवाह गरेको तीन दिन पछि उनले आफ्नी श्रीमतीले अर्कै व्यक्तिलाई प्रेम गर्ने थाहा पाएका थिए।
भारतको ओडिसाका बासुदेवले गत मार्च ४ मा धुमधामसंग विवाह गरेका थिए। विवाहको तीन दिनपछि तीन जना युवाहरु उनको घरमा आए र उनकी श्रीमतीको आफन्त भएको बताए। त्यसपछि दुई जनाले वासुदेवसंग कतै जाने बाहना बनाए र उनलाई संगै लगेर हिंडे तर एउटा युवक भने घर भित्रै थिए। बाटोमा वासुदेवले आफ्नो वालेट बिर्सेको चाल पाएपछि वालेट लिने घर फर्के। घर फर्किंदा वासुदेव जिल्ल परे। उनकी श्रीमती र ती युवक आलिङ्गन गरिरहेका थिए।
देख्ने बित्तिकै वासुदेव रिसले आगो भए, साथीहरु बोलाएर पिट्न लगाए। त्यसपछि पंचायत बस्यो। त्यतिबेला सम्म रिसलाई केही कम बनाएका वासुदेवले श्रीमतीको इच्छा अनुसार नै आफूले निर्णय लिने बताए । पंचायतले उनकी श्रीमतीलाई सजाय दिन चाहन्थ्यो, तर उनले श्रीमतीलाई सम्बन्धको बारेमा सोधे। वासुदेवकी श्रीमतीले आफू ती युवकसंग प्रेममा रहेको र उनीसंग नै बाँच्ने चाहना रहेको बताईन् । त्यसपछि वासुदेवले पंचायतलाई मनाएर श्रीमतीका आफन्तजनको पनि उपस्थितिमा विवाह गराइदिए ।
पंचायतले वासुदेवकी पूर्वश्रीमती बनेकी ती युवती र उनका प्रेमी तथा प्रेमीको परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो। वासुदेव भने पंचायतले यो निर्णय फिर्ता लिओस भन्ने चाहन्छन्। ती युवतीका माइतीले पनि बेइज्जत भएको भन्दै आफ्नी चेलीसंग नाता तोडेका छन्।
Previousचितवनसंग सम्बन्ध भएका अष्ट्रेलियावासीलाई सदस्यताको लागि आव्हान !
Nextआफ्नै छोरालाई तातो आइरनले डाम्ने एक महिला पक्राउ
जसले प्रेम पाउन जमिनदारी त्यागे !
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०३:५६
बीस वर्ष लुकाइएको अनुहार सार्वजनिक
२२ चैत्र २०७३, मंगलवार ००:५६